Wararka - Ku soo dhowow inaad booqato oo aad iibsato Bandhigga Canton ee 130aad
Tirinta! Carwadii 130aad ee Canton ayaa furmay
Laba maalmood ayaa dhiman!
Iyada oo hoos imanaysa hal-ku-dhigga kor-u-qaadista wareegga laba-geesoodka ah ee gudaha iyo dibaddaba, Carwadda Canton-ka 130-aad ayaa lagu qaban doonaa onlaynka iyo khadka tooska ah Oktoobar 15 ilaa 19. Carwadda ayaa inta badan lagu casuumi doonaa wakiillada wax soo iibinta Shiinaha, oo ay ku jiraan kuwa shirkadaha shisheeye maalgeliyaan, si ay uga soo qaybgalaan carwadda si toos ah, ku siinaya fursado ganacsi oo cusub, qiimayaal cusub iyo adeegyo cusub!
Diiwaangelin bilaash ah
Si loo sii kordhiyo xoogga faa'iidooyinka ganacsiga, shirkadaha shisheeye ee shaqaalaha Shiinaha waxay noqon karaan lacag la'aan, si kor loogu qaado is -weydaarsiga ganacsiga, is -weydaarsiga dhaqaalaha iyo ganacsiga!
Diiwaangelin degdeg ah
Gaar ahaan shaqaalaha shirkadaha shisheeye waxay u dejiyeen wakiilka soo-iibsiga soo-gelitaanka shahaadada hore, shahaadad-tooska ah ee internetka, caddayn toos ah oo toos ah, si ay kaaga caawiyaan ka-qaybgalkaaga si ka sahlan oo hufan!
Xoojinta doorka dhiirrigelinta ganacsiga iyo wadatashiga iyo madal isweydaarsiga, waxay qaban doontaa dhammaan noocyada kala duwan ee waxqabadyada taageeraya bandhigga, oo ay ku jiraan dhammaan noocyada madasha ganacsiga, sii -deynta alaabada, soo -iibinta iyo soo -iibsiga iibinta iyo wixii la mid ah, si loo hubiyo inaad ku farxi doonto oo aad guriga ku soo noqon doonto buuxa buuxa!